News – Sapana Sanjal
Sapana Sanjal : यस्ताे चमत्कारी विरुवा जुन घरको यो दिशामा लगाउनु भयाे भने धनको कमि कहियै हुदैन ! हरेक मानिसको भाग्यमा कुनै कुनै माध्यमबाट धन सम्पत्ति कमाउने योग बनिरहेको हुन्छ । योगको आधारमा मानिसले मेहनत गर्छन् र मेहनत अनुसार कसैलाई राम्रो र सजिलो हुन्छ भने कसैलाई क`ष्ट हुन्छ । सजिलो र गा`ह्रो भनेको मनिसको आफ्नो पूर्व जन्मको कर्म पनि हो भनेर गितामा उल्लेख गरिएको छ । पैसाका लागि मानिसले धेरै तरिकाबाट काम गरेर कमाउने गर्नेछन् । थोरै मानिसले मात्रै जान्ने क्रासुला, तिव्बतियन वास्तु शास्त्रमा मनी ट्री भनेर पनि चिनिएको । वास्तु शास्त्रका अनुसार यसको महत्त्व फेंगशुमा अत्याधिक महत्व दिएकाले पश्चिमी देशहरुमा यसको माग अत्याधिक रहेको छ । यसको प्रयोगबाट घर, अफिस, व्यापार व्यवसाय गर्ने स्थानमा राख्दा चुम्बक जसरी पैसा तान्ने उनीहरुको विश्वास रहेको छ । धन वृद्धिका लागि यो बिरुवा निक्कै उपयोगी रहन
Sapana Sanjal : काठमाडौं । द्वन्द्वग्रस्त अफ्रिकी देश सुडानमा खटिएको नेपाल प्रहरीको फम्र्ड पुलिस युनिट ९एफपियू० मिसन बन्द भएको छ । राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्कै निर्णयअनुसार मिसन बन्द भएको हो । मिसन बन्द भएपछि त्यहाँ कार्यरत ८६ प्रहरी स्वेदश फर्किएका छन् । अन्य ८३ जनालाई भने फरक जिम्मेवारीका लागि करिब ६ महिना राख्ने निर्णय भएको छ । एफपियूलाई पुलिस गार्ड युनिट ९पिजियू०का रूपमा आगामी डिसेम्बरसम्म राख्ने निर्णय भएको छ । पिजियूले युएन क्याम्प र बन्दोबस्तीका सरसामानको सुरक्षा गर्नेछ । सुरक्षा परिषद्ले गत ३१ डिसेम्बरदेखि नै सुडान मिसन बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो वर्षभित्र राष्ट्रसंघअन्तर्गत शान्ति मिसनमा खटिएका सबै सुरक्षाकर्मी फिर्ता हुनेछन् । सुडानमा विभिन्न देशका १३ वटा एफपियू कार्यरत छन् । अन्य देशका सुरक्षाकर्मी पनि फिर्ता भएका छन् । पूर्ण रूपमा शान्ति स्थापना भइनसके पनि सुडान स
Sapana Sanjal : काठमाडौ । कोरोना संक्रमण दोस्रो लहरपश्चात् तेस्रो र चौथो लहर ‘आउन सक्ने’ भन्दै तयारी अवस्थामा रहन सरकारले आग्रह गरेको छ । प्रथम र दोस्रो लहरले अत्यधिक मात्रामा प्रौढ तथा युवा संक्रमित भएकाले तेस्रो र चौथोमा बालबालिका बढी मात्रामा संक्रमित हुन सक्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले औंल्याएको छ । यसका लागि सबै अस्पताल स्वास्थ्य संस्थालाई स्वीकृत श याको कम्तीमा २० प्रतिशत कोभिड–१९ संक्रमित बालबालिका उपचारमा प्रयोग हुनेगरी तयारी अवस्थामा राख्न आग्रह गरिएको छ । मन्त्रालयले कोरोना संक्रमण लहर पुनः आउन सक्ने भन्दै सचेत र सजग रहनुपर्नेमा समेत जोड दिएको छ । गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा। मदनकुमार उपाध्यायका अनुसार संक्रमण दोस्रो लहरजस्तै तेस्रो, चौथो आउन सक्ने र त्यसबाट बालबालिका बढी संक्रमित हुन सक्ने भएकाले सबै अस्पताललाई शया छुट्याउन परिपत्र गरिएको छ ।यो समा
Sapana Sanjal :काठमाडौ । वैशाख २७ गते संसद बैठकमा विश्वासको मत लिने घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संकटमा परेका छन् । संघीय संसदको बैठकअघि गरिएको पीसीआर परीक्षणमा चार सांसदसहित ७ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यस अघि पनि कोरोना पुष्टि भएका सांसदहरुलाई जोड्दा अहिले सम्म १२ जना सांसदलाई कोरोना पुष्टि भइसकेको छ । केही सांसदहरु अस्पताल भर्ना भएका छन् भने कोही होम आइसोलेसनमा छन् । बुधवार गरिएको परिक्षणमा थप ४ जना सांसद र केही कर्मचारीमा कोरोना पुष्टि भएको हो । बुधबार सभामुखसहित १ सय २८ सांसद, सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारी लगायत बैठकस्थलमा सहभागी हुने ६ सय ९ जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको हो । बुधवार परिक्षण गर्दा कोरोना पुष्टि हुनेमा लक्ष्मणलाल कर्ण, पार्वती बीसी चौधरी, नरमाया ढकाल र रामबाबु कुमार यादब छन् । ६ सय ९ जनाको परीक्षण गरिएकामध्ये संसद सचिवालयका तीन कर्मचारीमा पनि कोरोना
Sapana Sanjal : काठमाडौं । संसारका धनीहरुमा नाम कहलाएका अर्बपतिहरु कस्ता घरमा बस्लान् ? भन्ने आम चासो रहन सक्छ । उनीहरुको घर जग्गाको बारेमा आम जानकारी पनि नहुन सक्छ । बिल गेट्स, जेफ बेजोस, मार्क जुकरवर्ग, वारेन बफेट तथा ब्लुमवर्गको घर तथा जग्गाका बारेमा आम मानिसलाई चासो रहनु स्वभाविक पनि हो । अर्बपतिको सूचीमा रहेका जेफ बेजोस १८१.४ बिलियन डलरका साथ शीर्ष स्थानमा रहेका छन् । यस्तै बिल गेट्स ११८.३ बिलियन डलरका साथ चौथो स्थानमा झरेका छन् । फेसबुकका सीईओ मार्क जुकरवर्ग पनि विश्वका अर्बपति सूचीमा पाँचौं स्थानमा रहेका छन् । उनको हाल १०१.८ बिलियन डलर बराबरको सम्पत्ति पुगेको छ । न्यूयोर्क शहरका पूर्व मेयर माइकल ब्लूमबर्गको, ५४.९ बिलियन डलरका साथ अर्बपतिको सूचीमा २२ औं स्थानमा रहेका छन् । यी सबै अर्बपतिको सूचीमा रहेका व्यक्तिमध्ये केहीले नयाँ विधि अपनाए भने केहीले उनीहरुले अचल सम्पत्तिल
काठमाडौं । दाङका पत्रकार दामोदर अधिकारीको कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट मृ×त्यु भएको छ । घोराही उपमहानगरपालिका–१७ बेलभार निवासी ४० वर्षीय पत्रकार अधिकारीको मङ्गलबार राति काठमाडौँमा उपचारका क्रममा मृ×त्यु भएको पारिवारिक स्रोतले जानकारी दिएको छ । अधिकारीले चैत २५ गते नेपाल पत्रकार महासङ्घ दाङमा निर्वाचनमा मतदान गरेका थिए । चैत २६ गते राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराहीमा पिसिआर परीक्षणका क्रममा उनलाई कोरोना भाइरसको स'ङ्'क्र'म'ण पुष्टि भएको थियो । स्वास्थ्य अवस्था बिग्रँदै गएपछि वैशाख ३ गते अधिकारीलाई हेलिकप्टर चार्टर्ड गरी थप उपचारका लागि काठमाडौँ लगिएको थियो । गोरक्ष राष्ट्रिय दैनिक दाङमा लामो समयदेखि कार्यरत अधिकारी पछिल्लो समयमा व्यवसायमा पनि संलग्न हुनुहुन्थ्यो । परिवारका एक्ला छोरा अधिकारीका श्रीमती, एक छोरा र छोरी छन् । यो पनि, बाँकेमा कोरोनाबाट थप एकको मृत्यु बाँकेमा क